Nagarik News - 'हिरो चालिस कटेपछि हिट हुन्छ'
टेलिसिरियल 'तितो–सत्य'का कारण सधैँ चर्चामा रहने दीपकराज गिरी यति बेला थप चर्चामा छन्। उनले स्त्रि्कप्ट लेखेको, अभिनय र निर्माण गरेको फिल्म '६ एकान ६' हिट भएको छ। नेपाली फिल्मको व्यापारमा खडेरी परेका बेला सानो पर्दाबाट ठूलो पर्दामा हिरो भएका दीपकसँग गरिएको हिरो–संवाद।
कमेडियनबाट 'हिरो' भइएछ?
हिरो त पहिले भएको थिएँ। फिल्म 'सुन्दर मेरो नाम'को हिरो हुँ, तर पछाडि 'फिल्म चाहिँ फ्लप भाको थियो है' भनेर थप्नुपर्थ्यो। पहिलो पल्ट हिट फिल्मको हिरो भइयो।
हिरो हुने रहर कहिलेदेखिको हो?
बाह्र वर्षकै उमेरमा नै हिरो हुने सपना सजाएको थिएँ। ऐनामा अनुहार हेर्न थालेपछि भने बिस्तारै सपनाबाट बिपनामा आएँ।
सपना देखेको झन्डै चार गुना वर्षपछि बिपनामा परिणत भयो?
साउथ एसियामा हिरोहरू ४० कटेपछि हिट हुने रहेछन्। हिन्दी फिल्ममा पनि सलमान खान, अजय देवगनहरू ४० कटेपछि नै हिट भएका हुन्!
अरू २० वर्षको उमेरमा हिरो बन्छन्। तपाईं चाहिँ करिअर सुरु गरेको २० वर्षपछि हिरो हुनुभयो।
भगवान्को कृपा अहिले आएर भयो।
हिरो भएपछि सलमान खानकै 'नक्कल' गर्नुपर्छ त?
नेपालमा सलमानका फ्यान ९० प्रतिशत रहेछन्। कसैको नक्कल त गर्नुपर्ने नै थियो।
हिरोलाई चाहिँ भिलेन बनाउनुभएछ!
यसको जस निर्मल शर्माजीलाई जान्छ। राजवल्लभ कोइराला उहाँको साथी, मैले हुन्छ भनेँ। उहाँ हिरोभन्दा भिलेनमा जम्ने मान्छे हो भन्ने यो फिल्मबाट प्रमाणित भएको छ। नेपालमा हिरो अनेक थरी भए पनि भिलेनको रोल गर्ने गतिलो मान्छे छैन।
नेपालीमात्रै होइन, हिन्दी फिल्मका अघि पनि तपाईंको फिल्म हिरो भयो है?
फिल्म रिलिज गर्नुअघि केही फिल्मकर्मी भन्थे, 'मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले अभिनय गरेको फिल्म 'हाँसिदेऊ एक फेर'लाई त फ्लप खुवाइयो, यी कुन खेतका मुली हुन् र?' चार नेपाली र दुइटा हिन्दी गरी छ फिल्म जुद्धा पनि हाम्रो व्यापार सफल भयो। दिनदिनै दर्शक बढेका छन्। मह जोडी सामाजिक रूपमा पनि हिरो हो। उहाँहरूको अपमान गर्नेविरुद्ध फिल्मले बदला लियो।
तपाईंले निर्देशन गर्ने सिरियल हिट छ। फिल्म पनि आफैँले निर्देशन गरेको भए 'डबल हिरो' भइन्थ्यो नि!
फिल्ममा शतप्रतिशत दिनुपर्छ। निर्देशक दिनेश डीसी टेक्निकल्ली राम्रा निर्देशक हुन्। उनले अहिलेसम्म गतिलो स्क्रिप्ट नपाएर हिट फिल्म दिन सक्नुभएको थिएन। त्यसैले यो फिल्ममा लिएका हौँ। अब मेरो गुरुलाई कसैले फ्लप डाइरेक्टर भन्न सक्दैन।
वल्लोपल्लो, तल्लोमाथ्लो...सबै ध्वस्त!
वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पको ७२ घण्टा नबित्दै हामी सिन्धुपाल्चोक पुगेका थियौँ। भूकम्पले तेस्रो दिन पनि स–साना झट्का दिइरहेको थियो। डर र त्रासबीच हामीले धुलिखेल हुँदै चौतारासम्म पुग्ने योजना बनायौँ।...